ဘုရား ဆိုတာ performances လုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး …“ အတိတ်တဘောင် , နိမိတ်ဆောင် ” – Na Pann San
Na Pann San W | March 20, 2020 | Knowledge | No Comments
လွန် ခဲ့ တဲ့ ( ၄ ) လလောက် က အမေရိကန် သံရုံးက ဦးဆောင်ကျင်းပ တဲ့ “Insight Out” အမည်နဲ့ ပန်းချီပြပွဲ မှာ မြတ်စွာ ဘုရားပုံတော် ကို Mask တပ်ပြီး performance လုပ်ကြ တယ် ။
သိပ်မကြာခင် မှာ Corona Virus’s ကြောင့် ရောဂန္တရ ကပ်ဆိုက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး Mask တပ်ရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားတယ်။ အခုလည်းလာပြန်လေပြီ………။ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေ တဲ့ မြို့မြရှုခင်း ကို နောက်ခံထားပြီး ကွဲအက်နေ တဲ့ ကမ္ဘာလုံး ကို မျက်ရည်ကျနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားက ချုပ်ဖာထေးနေတဲ့ ပန်ချီနဲ့ Performance လုပ်နေတာကို တွေ့ရပြန် တယ် ။
လေ့လာရသဆလာက် အိန္ဒိယပန်ချီ ဆရာတို့လက်ရာလို့ ယူဆ ရပါတယ်။
ဘုရားဆိုတာ performances လုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြည်ညိုဖို့ ပူဇော်ဖို့ပါ။ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်တာဟာ ပြစ်မှားစော်ကားတာပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်ရင် မဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်ချင်တာတြွေဖစ်တတ်ပါတယ်။ ယခင် ကလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကတွေရှိသလို ယခုလည်းလက်တွေ့ဖြစ်နေဆဲပါပဲ ။ နောင်ဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးတစ်ထင့်ထင့်ဖြစ်နေကြ ပါတယ်။
လောကမှာ အတိတ်တဘောင် နမိတ်ဆောင် ဆိုတဲ့ စကားလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကိုလည်းသတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ အထူးပြုပြောချင်တာကတော့ အများကိုးကွယ်လေးစားကြည်ညိုတဲ့ ဘာသာ တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး ဖြေဖျော်တာတွေ၊ အသုံချတာတွေ မလုပ်ဖို့ပါပဲ။ အနုပညာအမည်ခံပြီး ဘာသာတစ်ခုကို စော်ကားနေခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပါတယ် ။
သုခိတာ ဟောထ၊ ဒုက္ခာ မုစ္စထ➖ (ချမ်းသာဟူသမျှ ပြည်စုံကြပါစေ၊ ဆင်းရဲမှန်သမျှ ကင်းဝြေကပါစေ)
လှနျခဲ့တဲ့ (၄)လလောကျက အမရေိကနျသံရုံးက ဦးဆောငျကငျြးပတဲ့ “Insight Out” အမညျနဲ့ ပနျးခြီပွပှဲမှာ မွတျစှာဘုရားပုံတျောကို Mask တပျပွီး performance လုပျကွတယျ။
သိပျမကွာခငျမှာ Corona Virus’s ကွောငျ့ ရောဂန်တရကပျဆိုကျပွီး တဈကမ်ဘာလုံး Mask တပျရတဲ့ အခွအေနရေောကျသှားတယျ။ အခုလညျးလာပွနျလပွေီ………။မီးဟုနျးဟုနျးတောကျနတေဲ့ မွို့မွရှုခငျးကို နောကျခံထားပွီး ကှဲအကျနတေဲ့ ကမ်ဘာလုံးကို မကျြရညျကနြတေဲ့မွတျစှာဘုရားက ခြုပျဖာထေးနတေဲ့ ပနျခြီနဲ့ Performance လုပျနတောကို တှရေ့ပွနျတယျ။
လလေ့ာရသဆလာကျ အိန်ဒိယပနျခြီဆရာတို့လကျရာလို့ ယူဆရပါတယျ။
ဘုရားဆိုတာ performances လုပျဖို့မဟုတျပါဘူး၊ ကွညျညိုဖို့ ပူဇျောဖို့ပါ။ မလုပျသငျ့တာကို လုပျတာဟာ ပွဈမှားစျောကားတာပါပဲ။ ဒီလိုလုပျရငျ မဖွဈသငျ့၊ မဖွဈခငျြတာတွှဖေဈတတျပါတယျ။ ယခငျကလညျး ဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့သာဓကတှရှေိသလို ယခုလညျးလကျတှဖွေ့ဈနဆေဲပါပဲ။ နောငျဖွဈမှာကိုလညျး စိုးတဈထငျ့ထငျ့ဖွဈနကွေပါတယျ။
လောကမှာ အတိတျတဘောငျ နမိတျဆောငျ ဆိုတဲ့စကားလညျးရှိပါတယျ။ ဒါကိုလညျးသတိခပျြစခေငျြပါတယျ။ အထူးပွုပွောခငျြတာကတော့ အမြားကိုးကှယျလေးစားကွညျညိုတဲ့ ဘာသာတဈခုကို အသုံးပွုပွီး ဖွဖြေျောတာတှေ၊ အသုံခတြာတှေ မလုပျဖို့ပါပဲ။ အနုပညာအမညျခံပွီး ဘာသာတဈခုကို စျောကားနခွေငျးကို ပွငျးထနျစှာ ကဲ့ရဲ့ရှုတျခပြါတယျ။
သုခိတာ ဟောထ၊ ဒုက်ခာ မုစ်စထ➖ (ခမျြးသာဟူသမြှ ပွညျစုံကွပါစေ၊ ဆငျးရဲမှနျသမြှ ကငျးဝွကေပါစေ)
နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) လျှင် တစ်ကြိမ် ကမ္ဘာကြီး က လူသန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ အချိန်ရောက်နေပြီလား ???
ကမ္ဘာကသိတဲ့ နာမည်ကျော် သွားတဲ့ ပုံရိပ် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာ ဘေးကင်း တယ် ဆိုတဲ့ နိမိတ်လား…
ကြောက်စရာကြီးဗျာ… ပရလောက က ပုံရိပ်တွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အိမ်. ( ဂျင်းမဟုတ်ပါ …ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထတယ်ဗျာ…)